Resaky ny mpitsimpona akotry : fety no atao fampandriana adrisa | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fety no atao fampandriana adrisa
Fihetsiketsehana izao omankomanin’ireo komity nanankinana ny adidy mba hanatanterahana ny fankalazana ny Fahaleovantena amin-kafalina sy amim-piravoravoana izao. Sarotra no ahafahana manantena fa haredona ny amin’ity indray mitoraka ity. Henon’ny mponina lalandava mantsy fa injao manaloka ao ihany ny disadisa eo amin’ny sehatra pôlitika izay mitarika ahiahy eo amin’ny fiarahamonina ka tsy ahafahany ho tony. Fahatoniana inona koa moa no ho azo eo raha mbola miavosa ny fahasahiranana ary tsy mitombina ny fandriampahalemana.
Tsy mba satrin’ny vahoaka ve no hanana ny ampy ahafahana mandany izay mety fiarahana hankalaza izany tonontaona manan-danja izany? Fetin’ny vahoaka anefa io fa sao misy mihevitra fa fety fankalazana ny fitondrana. Asa raha izay no mahakaodikaody ny mpitondra eo an-toerana. Raha matsatso ny fankalazana dia izy ireo no tompon’ antoka. Ny tontolo iainana izay tantanany no mangeja ny fahafahan’ny olona ara-bola. Be no tsy manana ny ampy, na inona na inona fitiavana hanao fety, ny fihoaram-pefy anio eo amin’ny fandaniana mitaky trosa lafo rahampitso eo amin’ny fandoavana ny banga.
Eo andanin’izany anefa mitoetra lalandava ny ahiahy noho ity fandriampalemana mareforefo ity. Na ny famonjena lanonana iarahana mifalihavanja miaraka amin’ny besinimaro aza dia manahirana. Ny fiaraha-mientan’ny mpiray trano moa dia tsy afaka atao. Misy olona aza ao amin’ny ankohonana, misy ihany ny mpanafika. Mainka fa raha babangoana ny tanàna. Ny famonjena lanonana koa dia misy risika lalandava. Na eny an-dalana na any amin’ ny toerana tomefy olona dia tsy ilaozan’ny fisehoana fanaovana sotasota sy herisetra isan-karazany. Na noho ny toaka na noho ny hasomparana fotsiny izao. Tsy voafehy ny tany sy ny ratsy. Ny maratra mameno toeram-pitsaboana avy amin’ireny lanonana mamory vahoaka ireny dia maro kokoa no ireo olona vaosambotry ny mpitandro filaminana noho ny fanao ratsy nataony. Any amin’ny trano fivavahana sisa no fotoana. Na eo amin’iny sehatra iny aza anefa dia misy ihany ny fanontaniana mipetraka. Inona hoy ny mpitsikera ny antony itsabahan’ny fanjakana amin’ny fandrindrana ny fotoana fiderana? Samy manana ny mahaizy azy ireo finoana mijoro eto amin’ny tanàna. Tsy ilaina ho tantanana fa mahafantatra ny adidiny ny tsirairay. Andriamanitra anie no deraina amin’izany, tsy mendrika raha izany avy no hararaotina hideraderana.